Home Wararka Akhriso “Shirkii Doorashooyinka oo la soo xiray & war saxaafadeed ka...
[Deg Deg] Akhriso “Shirkii Doorashooyinka oo la soo xiray & war saxaafadeed ka soo baxay”
Waxaa magaalada Muqdisho maalintii lixaad ka socday shirka Golaha Wadatashiga Qaran ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka, oo ay yeelanayaan madaxda dowlad gobaleedyada dalka iyo Ra’iisul Wasaare Rooble.
Shirkan ayaa looga hadlayaa sidii xal looga gaari lahaa dhamaan tabashooyinka iyo khilaafadka ka dhashay doorashada dalka ka socota.
Madaxweynayaasha iyo xukuumadda ayaa hadda la sheegaya in inta badan ajendayaasha shirka xal ay ka gaareen, halka qaar kalena weli la isku mari la’yahay una badan tahay in halkooda looga tago.
Shirka oo goor dhaweyd la soo xiray ayaa waxaa ka soo baxay War Murtiyeed ka kooban ilaa 18 qodob.
Waxaa lagu heshiiyay in Doorashada Aqalka Hoose lagu soo afjaro muddo 45 maalmood ah taasoo ku eg 25 Febraayo ee sanadka 2022.
Halka Hoose ka akhriso Warmurtiyeedka
Previous articleBeesha Caalamka oo kulan Gaara ugu yeeray Golaha Wadatashiga inta aan la shaacin
Next article[DEG DEG] Shabaab oo weeraray deegaanka Cadakibir
Garsoore katirsan Maxkamada Puntland oo lagu dhaawacay Gobolka Bari
Kulamo xal raadin ah oo ka socda Balanbale